एजेन्सी । जब विद्यालय र शिक्षाको कुरा हुन्छ तब मनमा अनेक प्रकारका प्रश्नहरु उठ्न सक्छ । किताबले भरिएको झोला, पढाईको दबाब जस्ता कुराहरु आउँछन् । तर आज हामी विश्वका ५ अनौठा विद्यालयहरुबारे चर्चा गरौँ जुन सुन्दा तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ । विस्तृतमा
अचानक जन्ती नै गायब भएको यो रहस्यमयी ठाउँ
यस्ता घरमा बस्नु सँधै खतरनाक
यस्तो पनि परम्परा !
यस्ता छन् स्मरण शक्ति घटाउने केही तत्वहरु
एजेन्सी । मान्छे तनाबमुक्त हुन सक्दैन । तर, तनाव उत्पन्न गराउने केही कुराबाट सचेत हुन सक्यो भने स्मरणशक्ति घट्नबाट जोगिन सकिन्छ । स्मरण शक्ति घटाउने केही तत्वहरु यसप्रकार छन् ।
सुन्दरताको जालमा पारेर पुरुषको हत्या गर्ने एक खतरनाक युवती !
एजेन्सी । कहिल्यै तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ एक महिलाले पुरुषको हत्या पश्चात लाशलाई बलात्कार गर्ने र लाशको रगत पिउन सक्छिन् ? सायद धेरै विश्वास गर्न गाह्रो पर्ला ।
'ब्रेकअप पछि केटीहरु सोसियल मिडियामा एकदम एक्टिभ हुन्छन्'
आतंकवादी संगठन आइएसआइसलाई थर्कमान पारेकी एक युवती
विवाह नगर्न यस्ता अजबगजबको बहानाहरु बनाउँछन् युवतीहरु
उमेर पुगेपछि घरमा आमाबुबालाई लाग्छ विवाह गरिदिए आफ्नो जिम्मेवारी पुरा हुन्छ । तर आजकल २० देखि २५ उमेरभित्रका युवतीहरु विवाह गर्न रुचाउँदैनन ।
ब्रेकअपपछि यस्ता हर्कत गर्न रुचाउँछन् केटाहरु
समय सधै सुमुधुर कहाँ हुन्छ र । प्रेमीका वा पत्नी सबैको सधै कहाँ साथ दिन्छन र । सबैलाई श्रीमती वा गलफ्रेण्डसँग समय बिताउन खुब रमाइलो लाग्छ ।
यी हुन् ५ भाइरल भारतीय महिला
एजेन्सी । नेपालमा मात्रै होइनन् भारतमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरु एउटा सामान्य भिडियो वा फोटोको कारण भाइरल हुन्छन् । यहाँ हामीले भारतमा भाइरल भएका केही पात्रहरुको चर्चा गरेका छौं जसले नेपालमा पनि राम्रै चर्चा पाए ।